Category: Galmada maalintii
13.12.2020 13.12.2020 Dagami Comments on Galmada maalintii
Muddada uurka waxaa jira isbeddelo badan oo jidhkaaga ah. Waxaad la kullanataa isbeddelada soo socda:. Waxaa dhici karta sidoo kale inaad yeelato mid ama wax ka badan oo raaxo darrada soo socota ah. Tani waa caadi. Haddii aad hayso wax su'aalo ah, la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka.
Caadifadaada iyo dareenada waxay isku beddelaan si degdeg ah. Tusaale ahaan: waxaad dareemi kartaa farxad hal daqiiqo iyo ka dib murugo ama walbahaar. Dhammaadka uurka waxaad la kulmi kartaa dareenka walabahaarka iyo hurdo la'aan. Tani waxay sababtay dhaqdhaqaaqa ilmaha, muruq xanuun iyo kaadiyis int abadan ah, taas oo sidoo kale sababtay daal.
Muruqyada xidmaha aad ayay u debecsanyihiin oo waxay u shaqeeyaan si aayar ah muddada uurka. Tani waxay sababi kartaa calool istaag. Isbeddelada hormoonadaada muddada uurka waxay kordhiyaan qulqulka dhiiga ee ciridka.
Ciridkaagu waxa uu noqon karaa mid xaasaasi ah, cuncun leh oo bararay, oo waxa uu bilaabaa inuu dhiigo. Calaamadaha kala baxa waa basali ama layman bunni ah oo ku yaal maqaarka caloosha, naasaha ama sinaha. Waxaa sababa kala baxa maqaarkaaga. Calaamadaha kala baxa waxay qarsoomaan uurka ka dib, laakiin way sii yara muuqdaan. Waxaad marin kartaa kiriimka biyaha nuuga ama saliida calooshaada si aad u daryeesho maqaarkaaga.
Badanka haweenka uurka leh waxay dhib ka soo gaadhaa lugaha bararsan iyo cagaha, muhiim ahaan marka dhammaadka uurka. Lugaha bararsan iyo cagaha waxaa sababa cadaadiska kordhaya ee makaanka ee xididaha iyo qadarka kordhaya ee dhiiga gudaha jidhka.
Ka dib ummulidajidhkaagu waa uu ka duwanaada sida ay ahayd ka hor uurka. Tusaale ahaan: miisaankaaga iyo qaabka calooshaada iyo naasaha waxay ka duwanaan karaa sidii hore. Tijdens de zwangerschap verandert er veel in uw lichaam. U ervaart de volgende veranderingen:.Post a Comment. Waxaa jira rag fara badan oo rumaysan waxyaabo khuraafaad ah iyagoo khuraafaadkaasi u isticmaala marka ay u tegayaan oo ay la galmoonayaan haweenkooda,waxayna sameeyaan waxyaabo badan inta uusan dhicin galmada si ay xoog u yeelato galmadooda,qaar kalena oo ragga ka mid ah waxay isticmaalaan daawooyin marka ay u galmoonayaan haweenkooda, bartamihii bishii april sannadkii kii ayaa dalka Mareykanka ahi laga soo saaray kiniini tablet lagu magacaabo VIAGRA,kaasoo la sheegay in qofkii isticmaala uu helayo awood kacsiyeed, macnaha awooddiisa galmada ay xoog yeelanayso, isla maalintii la soo saaray kiniinigaa ayaa takhtar Mareykan ahi wuxuu u qoray ilaa shan boqol oo ruux oo wada ciniin impotents ahaa, dad badana waxay saf u galeen farmashiyeyaasha lagu iibiyo VIAGRA, haba u badnaadeen dadkii iibsanaayay odayaashe.
Waxaan kaloo aan dumarka looga tegi karin meelaha sharciga ah,haddii ay qabto xaylka ama caadad dhiigga,iyo nifaaska dhiigga dhalmada la yimaada Allah wuxuu yiri:waxay ku weydiinayaan xaylka,waxaad ku tiraahdaa waa dhib ee ka fogaada meesha caadada,hana u dhowaanina ilaa ay iska daahiriyaan,markay daahir noqdaana, uga taga meesha uu Allah idin faray suuradda Al-Baqara, aayad lambarwaqtiyada kale ee aan la isku tegi karin waxaa ka mid ah marka lagu jiro xajka iyo cumrada iyo marka la sooman yahay.
Waxaa laga yaaba in dad badan ay soo daliilsadaan xadiis uu abu Mansuur Al-Daylami ku soo saaray musnadka Al-Firdoos soona weriyay Anas Allaha ka raalli noqde kaasoo sheegaya:in nebiga sallallaahu caleyhi wasallama uu yiri: qofkiina yuusan naagtiisa ku dhicin, macnaha ku boodin sida ay xayawaanku sameeyaan oo kale,waana in ninka iyo naagtu u dhexeeyo adeege, nebiga sallallaahu caleyhi wasallama waxaa la weydiiyay, waxa loola jeedo adeege?
Waxyaabaha muhiimka u ah galmada waxaa ka mid ah: -In qofku uu niyaysto in ficilkaa galmada ee sharciga ahi uu naftiisa iyo ehelkiisaba ka ilaalinayo xaaraanta,imaaam Muslim saxiixiisa waxaaa ku xusan xadiis uu soo weriyay abu Dar Al-Ghafaariyi Allaha ka raalli noqdee,kaasoo sheegaya in rasuulka sallallaahu caleyhi waallama uu yiri: galmada uu qofku la galmoonayo ehelkiisa waxay noqonaysa saddaqo, markaas baa nebiga la weydiiyay:shahwada uu midkeen la imaanayo oo uu ehelkiisa la galmoonayo ma wuxuu ku helayaa ajar?
Maxamedeyn…iyo waa inoo mowduuc kale iyo markale inshaa Allah. Posted by UnknownPublished at July 12, and have 0 comments. No comments:. Newer Post. Older Post.
Cudurrada Galmada: Maxaad ka taqaan 4-ta Cudur ee cusub ee halista ah?
Ma wuxu doonayaa inan ahay qof diinta taqaan oo ku dhaqanta, mise inaa Like Saar.Dadka ayaa hoostodu kala duduwan tahay sida jidhka intiisa kale. Xubinta taranka dumarka ayaa yeelan karta midabo kala duduwan, dherer kala duduwan iyadoo timo kala duduwan ka bixi karaan. Waxa caadi ah in la yeesho calaamado iyo dhibco kala duduwan oo xubinta taranka dumarka ku yaala.
Lagama arki karro xubinta taranka dumarka inaad galmo sameysay ama aad wax gudaha siilka galisey. Miyaad garanaysaa sid ay xubinta taranka dumarka u eeg tahay?
Waxaad muraayad dhigi kartaa dhulka iyadoo aad ku kabaloodsanayso oo aad eegayso. Waxaad arki kartaa qeybaha xubintaada taranka dumarka ee dibada ku taala.
Waxa ku dhagan wax sida buro yar oo kale ah xagga ugu sareysa ee meesha ay debnahu iskaga yimaadaan. Waa qeybta dibada ee kintirka. Qeybta weyn ee kintirku waxay ku jirtaa gudaha.
Dhamaan kintirku waa mid dareenka galmada u nugul. Daloolka ay kaadidu ka timaado hoostiisa waxaad ku leedahay dalool ka weyn, afka hore ee siilka. Siilku waa sida kanaal qoyan oo jilicsan, kaas oo ilaa ilmo galeenka isku furan. Gudaha ayuu iskaga yara laalaaban yahay. Dhamaan siilku waa mid jilicsan oo fidi kara tusaale ahaan markaad kacsato. Siilka waxa uu ku geeyaa ilmagaleenka. Afka hore ee ilmogaleenka ayaa marmarka qaarkood loo dareemi karaa sida inuu fiix yar oo ku taala siilka xagiisa hoose ay tahay.
Ilmagaleenka dushiisa waxa ku yaala ugxan mareenka iyo ugxan sidaha. Ugxan sidaha waxa ku jira unugyo badan oo ugxan ah kuwaas oo noqon doona ugxan. Qeybo badan oo meelaha xubinta taranka ee dumarka agtooda ayaa tabashada aad ugu dareen badan.Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub.
Fursadda ugu wanaagsan ee uur lagu yeelan karo.
Cudurro badan ayaa soo baxa wakhti kasta, waxaana aan meesha ka marneyn infekshanka keena cudurrada lagu kala qaado galmada. Halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa afar nooc oo ka mid ah bakteeriyo khatar ku noqon karta caafimaadka dadweynaha. Waa cudur halis ah oo ay keento nooc ka mid ah bakteeriyada loo yaqaan Neisseria meningitidis, waxayna horseedi kartaa meningitis oo ah infekshan ku dhaca maskaxda iyo lafdhabarta.
Darasaad la sameeyay ayaa muujineysa in bakteeriyada Neisseria meningitidis laga qaado qufaca ama dhunkashada. Cilmi-baadhayaashu weli ma xaqiijin waxyaabaha sababa faafidda cuduradan oo ku dhaca dadka isku jiinsiga ah ee isu galmooda oo ku nool wadamada Yurub, Kanada iyo Maraykanka.
Waa bakteeriyada ugu yar oo la aqoonsaday sannadihii meeyadii, wuxuuna ku dhacaa dad yar oo lagu qiyaaso boqolkiiba labo, isagoo si gaar ahna ugu badan dhallinyarada qaan gaarka ah iyo kuwa ka hoseeya da'ada qaan gaarka. Mycoplasma genitalium ayaa ah bakteeriya lagu kala qaado galmada, waxeyna xubnaha galmada kuridaa infekshan, waxaa kale oo lala xiriiriyaa dhalmo la'aan iyo inay dumarku ilmuha ku dilmaan. Infekshankan ayaa keenaa calool majiir joogto ah iyo shuban dhiig watakaas oo ka caawiya gudbinta bakteeriyada, inkastoo uu cudurku la xidhiidho carruurta yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Demeter Daskalakis, oo ah gudoomiye kuxigeenka Waaxda Caafimaadka ee New York ayaa sheegay in cudurada lagu kala qaado galmada ay markii ugu horreysay noqdeen kuwo iska difaacaya dawooyinka lagu dabiibo ee Azithromycin oo sidoo kale loo isticmaalo daaweynta cudurka jabtada.
Hase aheetee, hay'adaha caafimaadka dadwaynaha waxay ka welwelsan yihiin awoodda faafitaanka ee cudurka Shigella. Sarakiisha caafimaadka ayaa dadka qaangaarka ah ee caafimaadkoodu wanaagsan yahay kula taliyay inay isticmaalaan dawooyinka qallajiyaha ah ee loo yaqaanno antibiotiga.
Cudurkan ayaa abuurma xilliga gogosha lamaanaha, sida uu sheegay Christopher Schiessl, dhakhtar ka hawl gala xarun caafimaad oo ku taalla magaalada San Francisco.
Tobankii sano ee la soo dhaafay,cudurkan ayaa wuxuu noqday mid aad ugu faafa Yurub iyo waqooyiga Ameerika, waxaana lala xiriiriyay cuduro badan. Marka loo eego bakteeriyada chlamydia, Cudurkan loo yaqaanno Lymphogranuloma venereum ayaa kordhin kara halista inuu qofka haleelo cudur sidaha HIV-ga.
Cudurrada Galmada: Maxaad ka taqaan 4-ta Cudur ee cusub ee halista ah? Lahaanshaha sawirka iStock Image caption Saynisyahannada ayaa walaac ka muujiyay cudurro cusub oo galmada lagu kala qaado. Mowduucyada la xiriira Canada Mareykanka. Gadaal ilaa kor.Post a Comment. Fadlan hadii aad ka yartahay 15 sano, waxaa haboon inaanad akhrisan.
Waxaad moodaa in bulshadeena ay ku yartahay wax waydiintu, taasoo u sabab ah aqoon la,aan baahsan iyo dadkeena oo aan inta badan wax wayn u arag waxyaabaha qaar sida dhibaatadan aynu manta ka hadli doono ee loo yaqaan premature ejaculation ama biyo baxa dagdaga ah wakhtiga galmada. Akhriste waxa hubaal ah in wixii xun uun laga xishoodo maadama ay wanagsantahay in aad ogaato waxkasta oo ku dhaca bani aadamka sida xanunada kala duwan oo badankooda laga dawoobo.
Waa maxay premature ejaculation ama biyo baxa dagdaga ahi? Waxa afka qalaad lagu yidhaa premature ejaculation ama biyo baxa dagdaga ah xiliga galmada, xanuunkan oo keena in qofku uu awood u yeelan waayo inuu xajiyo biyaha manida ah xiliga galmada iyadoo dhakhaatirka badankoodu ay isku raaceen in raga qaar ay ku biyo baxan wax ka yar 30sec ilaa 2 minute inta u dhaxaysa, mararka qaarna uu qofku biyo baxo isagoon wali hawshiba bilaabin, xanuunkan ayaa noqday mid fara baas ku haya dhalinyarta qarnigan nool, hadii aynu si kale u dhigno, iyadoon la odhan Karin waa xanuun wayn hadana way adagtahay in ninka dhalinyarta ahi uu tago dhakhtar oo uu soo bandhigo inuu ka cabanayo xanuunkan, akhriste, sida aynu wada ogsoonahayba caafimaadku waa shay muhiim u ah saldhiga nolosha.
Waxa suurto gal ah adigoon is ogayn inaad tahay qof ay dhibaatadani haysato, inaad guursato maalin maalmaha ka mida, mudo yar kadibna aad ogaato inaad tahay qof aan control lahayn xiliga galmada lagu gudo jiro,taasina ay ku sababi karto lamaanaha waji gabax iyo raaxo la,aan.
Gabadh ka mida gabdhaha caalamka ku nool ayaa jariirad online ah oo la yidhaa zawaj. Akhriste waxaad maanka ku haysaa in ay aanay xanuun ahayn in ninku biyo bax badani ku yimaad wakhtiga uu ku cusubyahay guurka taasoo ay ugu wacantahay raynranta uu galmada sexual excitement u hayo balse mudo yar ka dib aanad biyo bixi doonin adigoo la qabsan doona taasina waa caadi ah normal situation.
Maxaa keena premature ejaculationka? Waxa xaqiiqo ah in waxkasta oo qofka ku dhacaa ay leeyihiin sabab, hadaba dhibatadan oo noqotay mid ku baahaysa dhalinyarta da, yarta ah ayaa waxaynu soo qadan doona dhowr qodob oo ah waxyaabaha keena inuu qofku hore u biyo baxo. Soojeedka habeenkii oo isaguna ka mida waxyabaha keena, iyadoo lo bahanyahay qofku inuu yareeyo saamalaylka ama soo jeedka faraha badan. Tusale ahaan, adigoo ka fikiraya waxyaabo kale oo aad samayso galmo waxa hubaal ah in ay iman karto dhibatadani 3- Cabida sigaarku waxay qayb laxaadle ka qadata dhibatadan in qofku uu xajin waayo biyaha wakhtiga galmada, sababtoo ah unugyada dhiiga qaada waxay noqdaan kuwo aad u yaryar our cells become smaller due to smoking markuu qofku sigaarka cabo, taasoo hadhaw keenta in dhiiga qofku uu xoog u shaqayn waayo poor blood circulation.
Waxa la ogaaday in dhalinyarta rag iyo dumarba ay ugu wacantahay in boqolkiba konton ay ku keento dhibatadaasi biya baxa dagdaga ah marka uu qofku guursado. Maxaa dhibaato ka iman karta? Akhriste, waxaan filaya inaad fikrad fiican ka haysato mawduucan, waxaynu isku dayaynaa ama ay su,aasha ugu muhiimsani tahay, biyo baxa dagdagi ahi rag iyo dumarba dhibaato maku keeni karaa habsami socodka qoyska? Su,aashan oo in badan muran ka taagnaa ayaa dhawaanahan danbe la isku raacsanyahay in ay jawaabtu tahay HAA!
Way adagtahay in ninku uu ka hadlo dhibaatadan iyadoo raga badankoodu ay qarsadaan taasoo ay u arkaan inay tahay mid aan haboonayn in laga wada hadlo, akhriste dad badan ayaa aaminsan inay tahay ceeb in qof dhakhtar ah ama aqoon u leh dhibaatadan la waydiiyo sidii looga bixi lahaa. Waxa marag ma doonto ah, in wakhtiga galmada ay niyad jab wayn ku tahay lamaanaha in midkood uu hore u biyo baxo isagoon qofkii kale gaadhin ahmiyadii climax taasoo raga ay dhibaatadani haysato ay anfariir ka qaadan, inay la galmoodan xaasaskooda dhibatadan awgeed, iyagoo isku arka inaanay ahayn nin buuxa.
Isku soo wada duuboo, dhibaaatada ugu wayn ee ka iman kartaa waxa weeye inaad qancin kari waydo xaaskaga taaso mararka qaar keenta xidhiidh xumo qoys. Inagoo soo gaadhnay nuxurkii maqaalkeenan, warka fiicani waxa uu yahay in xanuunkan looga dawoobi karo si aad u dhibyar.
Akhriste, hadii aad hore ugu tagtay dhakhtar oo uu kusoo qoray kiniinada awooda siiya ninka xiliga galmada ee ay ka midka yihiin, Viagra, creams, spray etc, waxaad ogaataa in xaaladu ay kasii darayso, waxa la isku raacay in dhamaanba kiniinada noocaas ah ee tamarta siiya raga ay yihiin qaar aan haba yaraatee waxba ka tarin xanuunankan biya baxa dagdaga ah.
Dhalinyaro aad u tiro badan xanuunkan waxa ku keena iyagoo badankoodu daawada filimada aan fiicnayn ama loo yaqaan blue films waxay culimadu isku raaceen inay door wayn ka tahay biya baxa dagdaga ah, akhriste hadii aad jeceshahay inaad xaaskaaga qanciso waxa kale oo haboon inaad joojiso waxyaabaha aan hore u soo sheegnay oo aad maskaxdada u sheegto xaqiiqda, waxa kale oo aan hadal ka taagnayn in qofkoo kaligii biyaha iska keenaa uu dhaxli karo biya bax kadib markuu guursado ama ka horba.
Hadaba waa noocee habka ugu fiican ee aad kaga dawoobi karta? Dhalinyta u dhaxaysa da,daas waxa sabab u ah in ay hore u biyo baxaan guurka oo ay ku cusubyiiin iyo farxad galmo oo qofkii awood u yeelan waayo inuu control u sameyo biya baxa sexual excitement taasina wax dhibaato ah kuma laha qofka haba yaraatee, waxaad isku daydaa uun inaad hawsha mudo yar kadib bilowdo second go 3- Calooshaada oo buuxda ama aad cunto cuntay inta aanad galmada samayn kahor, akhriste waxa dhakhaatirku isku raaceen inay qayb wayn ka tahay biya baxa ragu marka ay calooshu buuxdo sex on full-stomach results premature ejaculation hadaba waxa haboon inaad 3 sacadood ka hor wakhtiga aad galmoonayso wax cuntay.
Qofka waxkale oo oo haboon inuu yareeyo galmada faraha badanle mudada hore ee uu rabo inuu xanuunkan ka bogsado, waxa ay culimo badani isku raacsanyihiin in galmada ugu fiican uu qofku samayn karo halkii week maalin, tani waxay soo celin kartaa tayada biyahaga iyadoo yarayn karta biya baxa badan ee had iyo jeer kugu iman kara. Cuntooyinka aad cunayso! Akhriste, cuntooyinkan waxaad cuntaa maalinkasta mudo 3 bilood ah insha allah waxaad la kulmi doontaa is badal wayn. Cuntooyinka aad u baahantahay:- 1.
Qamadida habeenkii hadaad heli karto casho ahaan 2. Xasiida macaan sweet corns 3. Baamiyaha isaga oo qadada lagu karinayo 4. Beans ka cad 5. Sesame seeds Tal 7. Basasha cad xabad maalintii way kugu filantahay 8.Post a Comment. Sheeko Waalan: Dumaashidey ayaan ku khaldoomay ee ila taliya Sheeko Waalan: Dumaashidey ayaan ku khaldoomay ee ila taliya.
Gabadh Somalia oo magaceedu yahay Sumaya Ahmed ayaa film sexy looga duubay fagaara ajnabiyiin badan buuxaan. Sumaya maaha Somalidii ugu Naagaha waxay ugu jecelyihiin inay dhabar dhabar u seexdaan oo kaddib ninka ku kor seexdo, si daran ayay ugu raaxaysanayaan qaabkan, maxaayPost a Comment. Title: : Galmada maalintii dhib iyo dheef?
Posted by UnknownPublished at July 11, and have 0 comments. No comments:. Newer Post. Older Post. Waxa uusan shaki ku jirin in Ibta labada naas iyo mantiqada ku hareersan ee midibkoodu yahay Pink Iyo Brown-ka in ay yihiin goobaha ugu d Niikada Galmada iyo codka haweenka xiliga galmada socoto waxay kordhiyaan macaanka raaxada. Nimanka ayaa la ogaaday in ay raaxo wali ah ka helaan qaylada cabaadka wadata ee loo yaqaan riinka kaasoo ay sameeyaan dumarka Xiliga loo d Ceeb ma ahan in hab waliba oo macaantaada ku heli karto gariirka galmada u sameeysohadaba galmada lagu sameeyo istaaga ayaa haween ba Salaaxista haweeneydu, kuma koobna oo qura labada naas, balse waxa loo baahan yahay in la salaaxo meelo kale oo jirka kamid ah sida; labad Gabdhaha buuran iyo kuwa dhuuban kuwee raaxo macaan?
Yi camera synology nas
thoughts on “Galmada maalintii”